mpanamboatra takelaka plexiglass - mpanamboatra lamba plexiglass China
Ny acrylic Plexiglass dia misy amin'ny takelaka haingam-bidy, takelaka feno, na habe mahazatra mahazatra. Plexiglass sheet dia glazing, signage, sneeze mpiambina, varavarankely na fampisehoana fitaovana izay matanjaka, mahatohitra hamandoana & mazava kokoa noho ny vera. Ny plexiglass dia mety hamorona hafanana tsy misy fahaverezan'ny mazava optika. Ireo takelaka akrilika ireo dia ara-toekarena, mahatohitra ny fiatraikany ary mety ho voadidy araka ny tokony ho izy. Raha mila plexiglass ianao dia aza mitsidika Home Depot na Lowes, miantso ny "Professional". Hetezo mivantana-ho-habe & sambo takelaka plexiglass mivantana eo am-baravaranao.
Ny takelaka Plexiglass dia misy habe sy hateviny isan-karazany. Ny toetra mampiavaka ny takelaka akrilika dia ahitana: Faharetana, mazava, hatsarana tsy miovaova, fahaiza-miovaova, fanoherana ny toetr'andro, maivana sy fiarovana, fanoherana UV, fanoherana simika ary fahombiazana miavaka. Ny takelaka akrilika dia manana fampitana hazavana tena tsara - mazava noho ny vera! Tsy hiova mavo izy io aorian'ny fiposahan'ny masoandro maharitra.
Plexiglass mahazaka fanoherana
Ny plexiglass mahatohitra Scratch dia manondro ny plexiglass miaraka amin'ny hamafin'ny faritra avo, fanoherana ny vodiny. Ny toetra ara-batana, ny toetra mekanika ary ny fanoherana ny toetrandro dia saika mitovy amin'ny plexiglass mahazatra. Ny hamafin'ny tampony dia avo, fanoherana ny ala, fanoherana ny volo ary fanoherana ny harafesin'ny simika.
1. Mangarahara tanteraka sy ny fampitana hazavana miaraka amin'ny 93%.
2. Insulated elektrika tena tsara, maivana tokoa.
3. Plastika avo lenta, fanodinana ary famolavolana mora kokoa.
4. Hamafin'ny sehatra matanjaka sy toetrandro tsara fanoherana ny fananana
5. Tsara loko, mora diovina
Entana ho an'ny mpanjifa: fanadiovana, fanaka, fitaovam-pitaterana, asa-tanana, tabilao baskety, talantalana, sns
2. Fitaovana dokam-barotra: famantarana famantarana, fambara, boaty jiro, famantarana, famantarana sns
3.Fitaovana fananganana: alokaloka amin'ny masoandro, tabilao fanamafisam-peo (takelaka fanamafisam-peo), trano heno an-telefaona, aquarium, aquarium, takelaka rindrina anaty trano, fandravahana trano fandraisam-bahiny sy jiro, sns.
4. Amin'ny faritra hafa: fitaovana elektrika, takelaka elektronika, jiro fanilo, jiro ho an'ny fiara ary fitaratry ny fiara isan-karazany, asa-tanana, sokitra, takelaka fanaovana sonia ary kilalao sns.